IPhone ayaa ku soo baxay dooqa caan casriga ah ee isticmaala dunida dacaladeeda. Sida ugu dhakhsaha badan aan ka heli duwanaansho cusub ee suuqa, uu jiro dalab sii kordhaya ee telefoonka inta jaalaha hal milyan oo macaamiisha ka qaaradaha kala duwan. Maxaa ka dhigay iPhone sidaas oo caan ah waa miday ka bixiya marka la eego shaqeynayaan. Cuntada in nooc kasta oo user, ka ganacsiga si hal abuur leh, iPhone bixisaa dabacsanaan si ay u qaadaan xafiiska oo dhan iyo shaqo kale oo ka mid ah qalabka. Si kastaba ha ahaatee, tani waxaa la socda qaar ka mid ah xaaladaha nasiibdarro halkaas oo ay dadku u muuqdaan in ay lumiyaan xogta ay. Tani waxay noqon kartaa sabab u ah dhowr sababood, si ay u bilaabaan la xogta aad la kharribeen ay sabab u tahay Barnaamijka qaar ka mid ah waxyeelada leh, ama si qalad ah. Waxaan ku qor 10 iPhone Data Recovery barnaamijyada Software lacag la'aan ah oo aad u isticmaali karaa on your computer Windows, ama Apple MAC, iyo garab, waxaan ka mid ah dib u eegista ka soo top sar portals warbaahinta bulshada.
Nidaamka ay taageerayaan: Window 8.1, 8, 7, Vista, XP (32-yara & 64-bit), Mac OS X 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, iyo 10.6 (32-yara & 64-bit)
Windows: Free Trial for Windows Version
Mac: Free Trial Version u Mac
Wuxuu ka caawiyaa in ay dib u soo ceshano nooc kasta oo xog ka qalab aad
Ka caawi soo celin xogta aad ka gurmad Lugood
Dhoofinta 8 nooc oo ah xogta waxaa laga heli karaa
Easy in ay isticmaalaan, si dhakhso ah, oo moodada
Casriyeeyay si loo daboolo baahiyaha awood badan ee macruufka-8
Wuxuu ka caawiyaa in dib u soo celinta xogta ka iCloud ah
Interface waa cadaalad ah oo fudud, taas oo si sahlan loo isticmaali
Taageerada macruufka 8 waa doorasho lagu kalsoonaan karo ka dhigaysa
Data xawaaraha scan waa la yaab leh la soomo
Qiimaha la goyn karo marka loo eego barnaamijyada kale ee suuqa
Muuqaalada Main aan la heli karin in version maxkamadda
Performance la macruufka 9 lefts in dib loo eego
Dib u eegida uu ka portals kale:
Download.Com: Aiseesoft Fonelab caddaynaysaa in la xal fudud, dhakhso ah, oo si sahlan loo isticmaalo haddii aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado files tirtiray iyo xogta ka iPhone, iPad, iPod Touch iyo, sidoo kale ka hayaan iCloud iyo Lugood. Ma ahan lacag la'aan ah, laakiin haddii aad u baahan tahay noocan ah software, ka dibna mid ka mid this waxaa fiican in qiimaha.
TopTenReviews.com: Aiseesoft Fonelab waa fursad weyn u soo kabashada xogta iPhone, gaar ahaan haddii aad isticmaasho telefoonka ugu horayn ganacsi, sida software ka soo kaban karto, inta badan xogta qoraalka. Haddii aad isticmaasho telefoon u dayada shakhsi dheeraad ah, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad niyad in awood la'aanta in ay si buuxda u soo celin photos haddii aad leedahay iPhone ugu dambeeyay.
TheTechHacker.com: Inta lagu jiro imtixaanka, waxaan dareemay in barnaamijka uu yahay mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan oo fudud inuu ka soo kabsado. Aiseesoft Fonelab waa barnaamij kaamil ah inuu ka soo kabsado xogta qalab macruufka lumay, ay timaado sida free ah in ay isku dayaan iyo version bixisay.
iMobie Phone Samatabbixinta
Systems taageerayaan: Window 8.1, 8, 7, Vista, XP ((32-yara & 64-bit), Mac OS X 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 (32-yara & 64-bit)
Windows (32 yara): Free Trial Windows Download
Windows (64 yara): Free Trial Windows Download
Mac: Download Free Trial Wixii Mac
Full Version Price: $ 49 (License Personal, bandhigidda Price)
Diiradda khayraadka ay ku soo celinta 22 nooc oo ah noocyada macluumaadka iPhone muhiim ah
Photos noqon kartaa celiyo ka Lugood, xitaa haddii xogta la Windows XP
Fariimaha iyo taariikhda Call badbaadiyey ee qaab HTML
Music, farriimo Skype, iyo warbaahinta kale files dhoofiyaa computer marka iPhone ma heli karo
Casriyeeyay si ay u taageeraan macruufka 8 iyo version ugu dambeeyay ee iPhone 6
Interface waa fududahay in la isticmaalo
Tallaabada A humanized hagitaan talaabo talaabo u fududaynaysa bilaabayso in la raaco
Diyaar la jaan qaada, Windows iyo MAC labada
Wuxuu ka caawiyaa in dib u soo celinta nooc kala duwan ee waraaqaha
Markii ugu scan waa mid aad u dheer, oo waxay noqon kartaa diiqayo
Ma baadho Lahjadaha cusub ee iPhone iyo macruufka 9
BestiPhoneDataRecovery.com: From na soo maray tijaabada, ka biyodiiday ugu weyn ee software ay tahay markii ugu badan codsiga qaadataa si ay u dhameystiraan baaritaan qoto dheer, waayo, kaarka micro SD 8 GB, ku qaadan lahaa 2 saacadood si aad u dhamayso oo dhan. Taas macnaheedu waa in ay u baadhaan kaararka weyn (ama xitaa nidaamka la kaydiyo gudaha weyn), markan waxaa laga yaabaa in ka sii weyn. Laakiin waa la fahmi karo in habka a jilicsan sidan oo kale suurto gal ku baabbi'iyee karaa qaar ka mid ah waqtiga si aad u hesho waxa ay guul u soo dhammaystay.
TapScape.com: PhoneRescue uu leeyahay isticmaalka ay laakiin waa xaqiiqo ah oo aan adag, Ololaha Nolol ku sixir in sameeysa ah waxa ay taasi ka soo baxay in uu noqdo. Waxay leedahay Yeedha style ah muuqaal iyo veneer oo quruxsan, laakiin habka salka u baahan tahay shaqo - oo dhan waxaa ka mid ah loo baahan yahay in si weyn loola fududeeyey oo si cad u sharaxay. Waxaa sidoo kale jira arrimo badan oo xasiloonida ee ciyaarta, iyadoo si joogto ah u tago barnaamijka si lama filaan ah labada dhufto. Si in ay la wareegaan xogta jir ah oo aan haysan si ay u sameeyaan backdate a full soo celiyo, PhoneRescue bixin doonaa qiimaha qaar ka mid ah, laakiin iMobie u baahan doontaa inaad kala miiri ay alaabta ku ool ah ka hor inta ay qalab ugu fiican soo kabashada xogta.
TopTenReviews.com: Qiimaha waa dhinaca sare ee celceliska, laakiin liisanka daboolayaa ilaa saddex kombiyuutarada deegaanka. Liiska FAQ website-saaraha ee mid dhamaystiran, inkastoo tiro farsamo phone taageero kolkiiba ma aha arki karo. Markaan isku soo, faa'iidooyinka iyo khasaaraha ka dhigi software this doorasho ku filan inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka iPhone, laakiin aan mid la yaab leh.
Wondershare Dr. Fone ee macruufka Review:
OS taageerayaan: Window 8.1, 8, 7, Vista, XP (32-yara & 64-bit); OS taageerayaan: Mac OS X 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 (32-yara & 64-bit)
Windows: Download Free Trial for Windows
Kaban karto xogta oo dhan macruufka Qalabka, gurmad iCloud, iyo Lugood
Facility si loo soo celiyo fariimaha, wicitaanada, xusuusinta, iyo xogta la mid ah
In uu ku la casriyeeyay si ay u daboolaan baahida macruufka 8
Xogta Codsiga waxaa sidoo kale lagu soo kabsaday karo, waayo, WhatsApp, Instagram, iwm
Waxaad sidoo kale dib u soo ceshano karo xogta haddii qalab la burburtay, la xaday, u baahan JAILBREAK
Xowliga kabashada xogta waa wax loo bogo
Interface waa waxtar bilowga ah
Files lumay la previewed karo ka hor inta geedi socodka soo kabashada ayaa la bilaabay
La socon, Windows iyo MAC labada
Dib u eegida uu ka Social Media portals:
BestiPhoneDataRecovery.com: qalabka Marka aad ku xidhmaan kombiyuutarka, qalabka soo kabashada xogta si toos ah iskaan lahaa dhamaan noocyada files badiyay u soo kabashada. Ka sokow, awood u leeyahay inuu ku eegaan dhammaan xogta laga badiyay ka gurmad iPhone, Lugood / iCloud ka hor inta aadan soo kabsado iyaga sidoo kale waa faa'ido, ka dib oo dhan, ka hor inta uusan soo kabashada xogta final siinayaa ammaanka badan ee aad u. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la sheego in version xorta ah kaliya aad oo dhan files recoverable iyo liiska muujinaysaa, laakiin ma waxaad awood dib u soo ceshano wax.
PCWorld.com: Dr. Fone ma u san yahay, sida ay u ma soo kaban dhammaan faylasha aan dhawrsan tirtiray, laakiin waxa ay ku dhowaaday. Waxaa hubaal ah SLT, laakiin haddii aad si qalad ah tirtiray sawir muhiim ah ama file, waanad og tahay in qaar ka mid ah wax karaayi.
CNET.com: argagax ay sabab u tahay tirka fariimaha qoraalka ah, sawirada ama macluumaad kale oo shil ka iPad, iPod taabto ama iPhone? Ma dhaawici ama jabinin iPod taabto ama iPhone, kaas oo lahaa xog muhiim ah ku yaal? Ayaa xogta aad laga saaray sababtoo ah update fashilmay? Hel takhtarka ku! Wondershare Dr. Fone waa aalad user-friendly kaa caawinaya in aad soo celin videos, sawiro, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, Deymaha maqan, abuse call oo jadwalka taariikhda ah. Xitaa Bookmarks Safari heli meeshoodii ku soo noqdeen eeliyaa on iDevices aad. Sidee waa in ay suurtagal tahay? Waxay u baahan tahay kaliya seddex talaabooyin fudud. Waxaad dib u eegi karaan faylasha aad laga badiyay, ka dibna ka soo kabsado iyaga sida in.
Leawo macruufka Data Recovery
Systems taageeray: OS taageerayaan: Window 8.1, 8, 7, Vista, XP ((32-yara & 64-bit); OS taageerayaan: Mac OS X 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 (32-yara & 64-bit )
Windows: Download Free Trial Wixii Windows
Mac: Download Free Trial for Mac
Kartida inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone si toos ah, iyo sidoo kale ka gurmad Lugood
12 noocyo kala duwan oo xog-nooc ayaa laga soo saari karaa
Qaabab file kala duwan ka iPhone la soo celin karin
Faylal ay la previewed karo iyo sifeeyay hor kabashada
Interface ayaa soo jiidata dareenka user
Waxaa jira taageero dib u soo ceshano xogta oo dhan qalabka Apple
Interface waa cadaalad ah oo sahlan in ay isticmaalaan
La jaan qaada versions kala duwan ee macruufka iyo taageero macruufka 8
Waxaa jira fursad u ku eegaan files iyo iyaga shaandhayso sida ay baahidaada
Ma baadho macruufka 9
Full Version waa lagama maarmaan haddii mid ka mid ah ayaa doonaya in uu badbaadiyo files si ay computer
Techywood.com: Ka sokow function soo kabashada xogta, barnaamijka multi-functional kabashada xogta waxaa sidoo kale ku qalabaysan gurmad Lugood soo saarida iyo sidoo kale hawlaha gurmad xogta, taas oo si deg deg ah iskaan karo iyo Macdan 12 nooc oo files kaga imaanayo Lugood ama hesho iyo 12 nooc oo gurmad faylasha ay si toos ah u baar qalabka macruufka aad. On top of in, barnaamijka gelineya inaad dhoofin oo dhan files marsiiyey in ay PC maxalliga ah ee Dufcaddii.
iPadInTouch.com: Inteeda badan, Leawo macruufka Data Recovery waa wanaagsan waxa ay tahay. Haddii aad isticmaasho Windows iyo leedahay qalab macruufka ah, waana wax weyn inaan leedahay. ICloud iyo gurmad Lugood labadaba way waaweyn yihiin, laakiinse kama bixiya helitaanka faylasha tirtiray ama laga badiyay. Haddii aad xiisaynayso, aad u badan tahay in marka hore ay soo bixi maxkamadda lacag la'aan ah.
BestiPhoneDataRecovery.com: Leawo macruufka Data Recovery la shaqaysaa dhamaan noocyada of iPhone, iPad iyo iPod. Ma loo baahan yahay in ay leeyihiin version macruufka ugu dambeeyey ee ka mid ah. Iyo wax aan jeclaa badan oo ahaa in ay u muuqatay in loogu talagalay "oo loogu talagalay dadka" oo aan "u injineerada". The fiirin iyo dareemaan, shaqada, tilmaamaha iyo wax walba waa cad oo qeexan, oo aan badhamada ee fursadaha, iyo mid aad u gudanayaa waxa dalabyo sheyga.
Systems taageerayaan: OS taageerayaan: Window 8.1, 8, 7, Vista, XP ((32-yara & 64-bit); OS taageerayaan: Mac OS X 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 (32-yara & 64-bit )
Recovery oo dhan xogta caadiga ah waxaa suurto gal
Waxaa jira taageero khasaaraha xogta dhici kara sababo in la gaarsiiyo, JAILBREAK, ama shil kasta oo kale
Casriyeeyay si ay u daboolaan baahida macruufka 8 iyo iPhone 6
Xulashada in ay ku eegaan files hortooda ku soo kabsaday
Waa aalad fudud, oo halkan, racfaan mass
Qalab Dhulku free
Interface waa wanaagsan
Xiriiriyaan la iPhone Mararka qaarkood waxaa adag
Ma baadho macruufka 9 iyo kala duwanaansho cusub ee iPhone
Ma aha in dhamaan faylasha la had iyo jeer baxey karo
BestiPhoneDataRecovery.com: Ka dib markii aad bilowday aad EaseUS MobiSaver, waa in aad ka saar qalabka oo mar kale xaq u furaysto. Dhibaatada waxa ay tahay in xataa OS computer aqoonsan qalab, barnaamijka free diiday inay arkaan. Dhibaatada waxay jirsatay muddo dhowr daqiiqo, oo aan fulineynin isbedel kasta oo meel, software iPhone oo lacag la'aan ah soo kabashada xogta aqbalay iPhone iyo in ay xaqiijiyaan macluumaadkaaga maamulo. In eray, EaseUS MobiSaver waa barnaamij buuxa oo niyad wanaag, fudud si ay u isticmaalaan, laakiin waxa ay ka dalbatay in dulqaad weyn ka user, sida mararka qaar waa gaabis ah u jawaaba.
PhoneDog.com: EaseUS ee MobiSaver noqon kartaa utility waxtar leh haddii aad u baahan tahay in ay isku dayaan iyo xogta qaar ka iPhone ama iPad badbaadiyo. Waxaan ku talinaynaa lahaa dheeraad ah haddii aad rabto in aad ka heli lumay photos, videos, qoraalo, ama xiriirada Bookmarks sida faylasha wali waxaa ka mid ah isticmaalka on your Mac. MobiSaver noqon lahaa wax badan oo kale oo muhiim ah haddii ay si toos ah u soo celin karo xogta in qalab aad, laakiin haddii ay badbaadiyay maqaarkaaga iyo ogaato in hal shay aad u ba'an dib doonayaa - waxa laga yaabaa in u dhigmata $79.95 qiimaha weydiinaya. Ka sokow, waxa ay si xor ah u tijaabiso oo arag naftaada.
TheSmartPhoneAppReview.com: Waa maxay waxaan jeclaa oo ku saabsan EaseUS MobiSaver Free waa sida ay u fududahay ahaa in la isticmaalo. Wax walba shaqeeyay si sax ah sida ay u sheegtay in ay doonayeen. Ahaanshaha freeware ah, si kastaba ha ahaatee, ka dhigaysa in ay aad u yareysey. Kaliya 5 xiriir la karaan soo celiyay mar iyo files waa in la soo xulay mid ka mid waqti. Kabashada Message kuma jirto. Dabcan haddii aad jeclaan lahayd in la gaarsiiyo iyo bixiyo $69.95, waxaad ka heli kartaa version a pro in dardar doonaa habka la taageero casriga ah oo lacag la'aan ah ka mid ah.
Free iPhone Data Recovery:
Systems taageerayaan: taageerayaan OS: Windows 8, 7, Vista, XP, Win 2000, iyo wixii ka sareeya.
Si toos ah soo kabsado xogta laga qalabka macruufka iyo gurmad Lugood
Xarunta inuu ka soo kabsado fariimaha, wicitaanada, iyo Bookmarks browser
Casriyeeyay si ay u taageeraan macruufka 8 iyo kala duwanaansho cusub bilaabey 2014
Xogta laga badiyay ay sabab u tahay hagaajinta qalabka, JAILBREAK, la raadsan karaa
9 nooc oo ah noocyada macluumaadka iyo 10 nooc oo ah noocyada content warbaahinta la raadsan karaa
Caawinaya qalabka la macruufka 8
Faylal ay la previewed karo ka hor inta geedi socodka soo kabashada ayaa la bilaabay
Ma baadho macruufka 9, iyo kuwa cusub Apple duwanaanshaha 2015
Techprevue.com: Ma aha oo keliya iPhone software kabashada xogta, laakiin universal macruufka software kabashada xogta taageera kabsado qalabka macruufka Apple oo dhan ee ay ka koobnaayeen dhamaan noocyada in Apple abid la daabacay. Qalabka macruufka inta badan macnaheedu iPhone, iPad iyo iPod.
iSkysoft.com: Marka aad tirtiro xogta aad on your iPhone oo dhan, dayactir ku macruufka aad, ama soo celin goobaha warshad ka dibna aad lumiso xogta markaas waxaad isticmaali kartaa barnaamijka ,. Tani Saaxiibkiis kale u fiican tahay iPhone 6. Waxaa soo celin kartaa fariimaha, uyiri Bookmarks Safari, xiriirada iyo wac taariikhda kaliya la magacaabo wax yar. Waa ay fududahay in la isticmaalo, maxaa yeelay, ay user-interface. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad dib u soo ceshano xog gurmad ka Lugood. Ka dib markii ay soo kabsaday files aad si xor ah u gudbiyaan karaan hadalka, HTML, Numbers, Pages, HTML si aad awoodo gurmad iyaga.
Systems taageerayaan: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP
Kabsado karaa ilaa 9 noocyada xogta laga qalab macruufka
Caawin kartaa dib u soo ceshano 17 nooc oo ah xogta ka gurmad Lugood iyo iCloud
Taageerada wareejinta xogta saddex hababka kala duwan
Waxay noqon karaan waxtar leh qalabka ka weyn macruufka
Soo celin karaa tiro ka mid ah noocyada file
Qaadataa waqti aad u badan in laga baarayo qalabka
Haddii aan dalab qiimaha, barnaamijka waa wax yar oo qaali ah
Cisdem.com: iSkySoft iPhone Data Recovery u Mac waa xal kabashada xogta hal-stop ah si loo soo celiyo iPhone photos, xiriirada, fariimaha oo dheeraad ah oo ku qasabno yar. Tani software kabashada macruufka Macdan karo oo soo kabto wixii aad rabto in aad ka iCloud iyo Lugood gurmad, oo ay ku jiraan sawirrada, app photos, fariimaha, xiriirada, wac taariikhda, farriinta, fariimo WhatsApp, Notes, Calendar, waano, Safari Bookmarks, qoraal cod iyo waraaqaha app, Sida waxa Cisdem iPhone Recovery falaa.
iGeeksBlog.com: Shaqada muhiimka ah kaas oo iSkySoft waxaa si fiican u yaqaan waxaa soo kabsaday xogta in uu lumo, si qalad ah la tirtiro. Tani waxay dhacdaa wax badan oo marka aad ka soo reynaya sidii wax, ama marka aad isku daydo mid ka mid ah kuwa syncs iCloud. Photos lumay, xiriirada, farriimaha: kuwan oo dhan waxaa laga heli karaa on iPhone / iPad ama qalab kasta oo macruufka. ISkySoft u shaqeeya sirdoonka inuu ka soo kabsado, kuwaas oo xabbadood lumay xogta iyo kabsado iyaga intii suurogal ah.
Business2Community.com: Halkan software aad siisaa fursad aad ku previewing files iyo waxaad ka heli doontaa xogta soo bandhigay magacyada iyo qaab-dhismeedka file. Waxa kale oo aad ka heli doonaan in ay arkaan sawirada, emails ama qoraalka aad u gudbiyo, laakiin kaliya haddii aysan waxyeelo ama overwritten. Software Tani waa la jaan qaada Windows 8 oo wax ugu xiisaha badan waa in aad si fudud u joojin kartaa iskaanka markasta oo aad rabto ama waxaad badbaadin kartaa warbixinta oo dhan baaritaan loogu isticmaalo mustaqbalka. Taasi waa sababta dadka hubaal siin doonaa isku day ah, sababtoo ah ma ah mid qasan.
Systems taageerayaan: 6s iPhone Plus / 6s / 6 + / 6 / 5s / 5c / 5 / 4s / 4 Lugood 12.2 iyo macruufka 9.
Kabsadaan ilaa 20 nooc oo ah noocyada macluumaadka iPhone aan hayaan
Saddex soo kabsado hababka u soo kabashada ee xogta
Taageerada si hagaagsan xiriirada, fariimaha, iyo Qoraallada Hagidda si toos ah iPhone
Store files kaga imaanayo Lugood si aad Computer
Soo kaban karto, ku dhawaad ​​nooc kasta oo nooca file xogta ka your computer
Casriyeeyay oo loo adeegsado arrimo 8
Iyada oo aan wax dalab, qiimaha barnaamijka waa heer sare ah
Ma loo isticmaali karaa arrimo kale 8 qalabka
iGeeksBlog.com: free version Tenorshare iPhone Data Recovery ee aad ku tusi doono oo dhan files ah in uu ka dareemo (diyaar u ah soo kabashada) laakiin si ay u soo si aad u computer, waxaad u baahan doontaa in aad iska diiwaan gelin. The $69.95 qiimo-tag waa yaacday, gaar ahaan anigoo eegaya kale oo ka jaban oo, Waa in aan qiro, ma aha mid fudud oo wax ku ool ah sida Tenorshare inkastoo comparably sidaas. Sidoo kale, waxaan maqlay wax wanaagsan oo ku saabsan taageerada Tenorshare si aad iibsanayso wax runtii adag.
TopTenReviews.com: Tenorshare waa cad oo ku saabsan qalabka ay taageerto. Waxa ay taageertaa noocyada phone labada GSM iyo CDMA, sida uu website-keeda. Laga bilaabo 3 iPhone, taageero sii jidka oo dhan ilaa iPhone 6 Plus. Waxaad heli kartaa tijaabooyin lacag la'aan ah oo dhan iterations of software si aad noqon kartaa hubiyo in si fiican ugu adeegi doonaa baahida soo kabashada aad. Kuwa la wax shaki ah, soo saaraha waxay bixisaa taageero farsamo oo 24 saac maalintii, 7 maalmood toddobaadkii.
iMobie.com: Tenorshare iPhone Data Recovery, sida magacaba ka muuqata, waa software kabashada xogta keliya ee iPhone. Waxa uu ku siinaya 3-kabashada siyaabo inuu kaa caawiyo inaad xogta dib tirtiray ama laga badiyay ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud hesho. Waxa ay taageertaa kor u soo kabsaday 15 nooc file on iPhone ka mid ah Messages, Xiriirada, Notes, Photos, Videos, xogta App, farriinta, iwm Waxaa sidoo kale saamaxaya kuwa isticmaala inay ku eegaan xogta hor-kabashada iyo eegista soo kabsado.
Walaal jilicsan iRefone
Systems taageerayaan: Windows (si buuxda u la jaan qaada Windows 10 / 8.1 / 8 / XP / Vista)
Windows: Free Download Trial
Kabsado xogta laga tiro badan macruufka Devices
Ceshano xogta ka Lugood ee kaabta degdeg degdeg ah.
Dib u bilaabi xogta ka macruufka Qalabka la macruufka 7, macruufka 6, macruufka 5, iyo in ka badan.
Orda oo data / gurmad lumay macruufka Xiriirada, Call History, Quraanka, Calendar, Xusuusin, Safari Bookmark, & Notes.
Kaabta xogta sare oo Camera Roll (oo ay ku jiraan videos), Photo Stream, Lifaaq Message, Voice cadaymaha, & Safari History.
Si toos ah loo ogaado kaabta Lugood iyo qalabka macruufka xiran.
Hal-guji nuqul & iskaan iDevices / data kaabta Lugood ee xawaaraha si dhakhso ah
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh xogta laga keeno sida sawirada, fariimaha, taariikhda wac, iwm
Cayimista Easy tirtiro xogta iyo macluumaadka ee hadda jira.
Ma baadho macruufka 9 iyo Apple Lahjadaha bilaabey 2015
Price waa culus yar ee jeebka
Get-iOS-Data-Back-Recovery.com: Tani waxay awood leh iPhone / iPad / iPod software kabashada xogta ka caawin kara in aad soo kabsadaan ilaa 12 nooc data waaweyn sida Xiriirada, Messages, Call History, Notes, Items Calendar, Xusuusin, WhatsApp iyo Safari Bookmarks eegista. Interface user-friendly iyo humanized user-hage u samaysaa wax fudud oo si sahlan ay u isticmaalaan. Waa maxay dheeraad ah, xawaaraha si dhakhso ah soo kabsaday ka dhigaysa in ay u istaagaan ka kacay suuqa iPhone kabashada xogta. Haddii aad rabto in aad hesho xogta dib tirtiray ka iPhone on Mac, fadlan ka Brorsoft iRefone u Mac.
> Resource > Ladnaansho > Top 9 Free iPhone Data Recovery Software u Mac iyo Windows